Ukuthunyelwa kwemiyalezo ye-Sexting - Into eyingozi phakathi kwentsha
Ukuthunyelwa kwemiyalezo ye-Sexting-yingozi Ngokwesini kunye nokukhanyiswa
Ukuthunyelwa nge-Sexting kunokusongela abantu abachaphazelekayo
Isiphetho esiphethayo - musa ukuthobela i-sexting!
I-term ye-post ye-sexting iqulethwe ngamazwi ngokwesini kunye nokuthumela imiyalezo ngokulandelanayo kwaye ibandakanya ukusasazwa kwezinto ezithintekayo kwi-Whatsapp okanye kwiintanethi zentlalo njenge-Facebook. Ngokubanzi, ukuthunyelwa kwemiyalezo yokuthumela imiyalezo kubandakanya ukuthumela kunye nokwabelana ngezithombe kwiindawo eziphazamisayo kunye nakwamalungu abucala.
Lo mkhwa wolutsha ngoku uthathwa njengongabaza kakhulu, kuba ukuthunyelwa okanye ukulayishwa kwezithombe rhoqo kufakwa kwizandla ezingafanelekanga.
I-intanethi ye-Trending Sexting - I-Virtual Striptease
Ngokungaqhelekanga, imifanekiso ejoliswe kubahlobo okanye nayiphi na enye umntu iphelela kwiindawo zoononografi, ezisetyenziswe ngababoneleli ngaphandle kwemvume.
Ngokwenene, nayiphi na isigidimi esithunyelwe kunye nomxholo obusondeleyo yingozi, kuba ichaphazelekayo ukusuka kule mzuzu ingenamandla kwaye ayinakho ulawulo phezu kokubuyiswa kwakhona.
Kutheni ukuthunyelwa kwe-imeyile kudlalwa ngabantu abasha?
Ngokukodwa abantwana abaselula ekukhuleni bafuna ukubonakalisa into kwabanye. Ngokuqhelekileyo, umxholo okhuselekileyo uthunyelwa phakathi kwabahlobo ukubonisa ubungqina bemizimba yabo nokuzidumisa.
Ngale ndlela, abantu abatsha banyuse ukuzithemba kwabo kwaye ngokunjalo bayazuza ngokuthumela imiyalezo ye-imeyile. Ukongezelela, ukuthumela umxholo okhuselekileyo kusetyenziswa ngokubalulekileyo ubudlelwane bokubonisa umlingane wakhe uthando kunye nokuvusa isondo.
Ewe, ukuthunyelwa kwemiyalezo ye-imeyli kubangela ezinye izingozi kubasebenzisi, ekubeni aba bantu bancinci. Njengoko uyazi, ulwalamano aluhlali ixesha elide kule minyaka kwaye ngoko lunokusetyenziswa ngumbutho omnye ukucinezela omnye. Kule ngongoma, ukupapashwa kwezithombe kufuthi kusongelwa, ikakhulukazi kwiintanethi zentlalo ezifana ne-Facebook okanye i-Twitter.
Isiphetho - qaphela, apho utyhila okuthile malunga nawe!
Kodwa nangona kungenakulungela kungena ekuthumeleni okuqukethwe, ukuba umyalezo we-Whatsapp, umzekelo, wawuthunyelwe ngengozi kubantu abaninzi. Ukongezelela, iifoto ezifunyenweyo zigcinwa ngokuzenzekelayo, ezingakhokelela kwiimeko ezihlazo xa ubonisa igalari yakhe ukubonisa imifanekiso ebalulekileyo yabantu abathathu.
Ifa lemifanekiso engabonakaliyo yabantu abangaphantsi kobungozi bunzulu, njengoko oku sele kunokuthi ithathelwe ingqalelo kwimeko yoononografi yabantwana.
Unokuzikhusela njani njengomkeli okanye umthumeli ngokubhekiselele kwiingozi njengoko kunokwenzeka?
Njengoko umthumeli ngaphambi kokuba uthumele umxholo okhulayo ukhulisa ulawulo. Kufuneka ujonge umgca wommkeli kabini kwaye ubeke ingqalelo kwiisetyenzisi zefowuni.
Umzekelo, xa ulayisha imifanekiso kwi-Facebook, abaphulaphuli banokucaciswa. Ukongezelela, ukutshatyalaliswa akufanele kubonakalise ubuso okanye iimpawu ezizodwa, ukuze kungonakaliswe ekusasazeni njengexhoba. Ukuba umntu ufumana kwiifoto ze-Sexting ezingenanto, umntu kufuneka asuse isithombe nangona kubonakale kumtsalane ngokukhawuleza.
Ngokomlinganiselo omnye awusenayo (umntwana) umxholo wezobulili kunye ngoko ke ngokuqinisekileyo kwicala elikhuselekileyo. Ukongeza, umngcipheko wokushicilelwa okungafunekiyo xa kuthengiswa kakubi i-smartphone ngabahlobo okanye ukulahleka.
Ukuthunyelwa kwe-Sexting kusetshenziswe ngokungenakusetyenziswa ngabantu abaninzi abaselula, okwandisa kakhulu umngcipheko wokusasazeka okungafunekiyo. Ewe, njengomntwana osemtsha, unako ukunyanzeliswa ngabahlobo kwaye ngoko thumela iifoto ezithandanayo ukusuka kwingcinezelo yontanga.
Nangona kunjalo, akukho mntu angathanda ukubonakala kwiiwebhsayithi zoononografi ngaphandle kwemvume yazo kwaye ngoko ngoko angabi nohamba phambi kwezigidi zabantu.
Ngoko ke, kubalulekile ukuba ubuncinane babone ingozi yokuthunyelwa kwe-imeyile kunye nokuthatha amanyathelo afanayo. Kufuneka uhlale unika ingqalelo ukuba ngubani oyithumelayo iifoto kunye nokuba ungangobungozi ngenxa yezicwangciso ze-Smartphone uthayibha ngokuzenzekelayo bonke oonxibelelwano njengabamkeli. Okucetyiswa ngokukodwa kukuthunyelwa komxholo okhuselekileyo okwenza ungabonakali kwaye akukho ubuso kunye nezinye izinto eziqhelekileyo.
Ekugqibeleni, kunokuhlala kusongelwa, ngoko kufuneka ufune ubuncinci imfuno yolu hlobo lutsha.